लगानीकर्ताहरुका लागी खुसिको खबर,बिभिन्न नौ कम्पनीको शेयरमा सर्किट - UjyaloNepal
कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये आज सामूहिक लगानी कोषको मात्रै ०.०५ बिन्दुले ओरालो लागेको छ ।
यस्तै, सिटजन म्युचुअल फण्ड ३.५८, रैराङ हाइड्रोपावर २.२४, एनआइसि एशिया ग्रोथ फण्ड २.०५, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १.९६, एनआइसि एशिया फण्डका लगानीकर्ताले १.९५ प्रतिशतले गुमाए ।
आजको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ४१ खर्ब २४ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख ४२ हजार ८५८ बराबर पुगेको छ ।
गुल्मीमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्धारा एमसिसि विरुद्ध विरोध प्रर्दशन !
खुसिको खबर नयाँ कम्पनिको आईपीओ आउँदै,कहिले र कति ?
भोलि देखि नयाँ आईपीओ आउँदै,कुनको कति ?